Warbixin kooban oo ku saabsan qaraxii Lubnaan ka dhacay | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Warbixin kooban oo ku saabsan qaraxii Lubnaan ka dhacay
Warbixin kooban oo ku saabsan qaraxii Lubnaan ka dhacay
Madaxda Lubnaan ayaa maalinimadii Arbacada iclaamiyay in baaritaan dhinac kasta ah ay ku sameyn doonaan qaraxii galabkii Talaadada ka dhacay dakada magaalada Beyruut oo ah caasimada Lubnaan.
Qaraxani oo ahaa mid si weyn u gilgilay magaalada ku nafwaayay tiro kabadan 135 ruux halka ay ku dhaawacmeen 5,000 (Shan kun) oo qof, waxuuna sababay ku burburtay hanti kabadan 4 billion dollar sidoo kalana boqolaal kun oo qoys ay ku guryo beeleen.
Madaxda Lubnaan ayaa kiiska qaraxaan u xil saaray saraakiisha amniga dalkaasi iney xog dhameystiran ka keenaan macluumaad kasta oo la xiriira qaraxaasi sida sababta loo keydiyay maadooyinkaas qarxa, magacyada raggii mas’uulka ka ahaa ilaalinta maadooyinkaas, iyo raggii ka howlgalayay bakhaaradii ay ku keydsanaayeen kuwaasoo uu qaraxa ka dhacay.
Dhanka kale, wasiirka caafimaadka Lubnaan ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen 135 qof halka 5,000 qofna ay ku dhaawacmeen, ayadoo dhanka kalana duqa magaalada Beyruut uu sheegay in qaraxaasi ay ku shaqo beeleen tiro kor u dhaafeyso 300,000 oo qof.
Madaxweynaha Lubnaan Mishal Cown ayaa asigana sheegay in musiibada ku habsatay aysan kahor istaagi doonin sidii ay baaris ugu sameyn lahaayeen cidii ka dambeysay qaraxaasi asigoona sidoo kale ku goodiyay iney xisaabin doonaan cid kasta oo ku lug laheyd inuu qaraxaasi dhaco.
Mishal Cown ayaa yiri; “2750 tan oo ammonium nitrate iney ku keydsanaadaan dekeda mudo 6 sano ah ayagoo aanan loo sameynin nadaam looga ilaaliyo iney gubtaan waa arin aanan gabi ahaanba la aqbali Karin”.
Qaraxa Lubnaan ka dhacay ayaa wuxuu kusoo aaday xili Lubnaan ay bartanka kaga jirto sicir bararkii ugu xumaa oo ay galeen qarnigaan la joogo ayadoona lacagta Liirada dalkaasi ay hoos u dhacday 80% taasoo muujineyso xijmiga uu la egyahay sicir bararka uu dalkaasi ku jiray.
Shacabka Lubnaan ku nool ayaa musiibadaan kahor 50% cunto la’aan ahaa waxayna warbaahinta ku warantay in dadka qaar ay guryahooda iyo dharkooda iibinayeen sidii ay cunto u heli lahaayeen owgood, in xaal nuucaas ayagoo ku jiro uu ku habsado qarax kalabar magaalada burburiyay ayaa waxay ka dhigantahay in Lubnaan ay bartanka kaga jirto maanta xaalad tii ugu xumeyd abid ay gasho.
Maadooyinka qarxay ee ammonium nitrate ayaa waxaa siday doon uu surnaa calanka Maldova waxayna ka timid dalka Georgia ayadoona ku socotay Mozambique hase yeeshee xili ay mareysay xeebaha Lubnaan ayaa waxay la kulantay cilad arintaasoo sababtay iney kusoo leexato dakada Lubnaan, waxaana dhacday kadib markii doontii baaris lagu sameeyay in laga helay 2750 tan oo maadooyinkaan qarxa waana maadooyin loogu talo galay bacriminta beeraha.
Kiiska baaristaas ayay maxkamada Lubnaan amar ku bixisay inaan doonta meesheeda laga dhaqaajin arintaasoona sababtay in dadkii lahaa Doonta iyo dadkii ay badeecada u rarneydba isaga quustaan oo meesha uga haraan waxayna sidani dhacday sanadkii 2014tii.
Kadib badeecadii doonta ayaa waxaa lagu wareejiyay loona soo daabulay bakhaarka 12aad ee dekedda magaalada Beyruut si loogu keydiyo waxaana dhowr mar oo ay qaar katirsan laamaha ammaanka Lubnaan kormeer halkaasi ku tageen ay ka digeen iney arinkani tahay halis weyn sidoo kalana maadadaan ay dhici karto in daqiiqad walba gubato oo qaraxdo ayagoona dhowr digniinood soo saaray waxayna digniintii ugu dambeysay soo saareen 6 bilood kahor balse ugu dambeyn shalay ayay qaraxday kadib dab ka kacay goob bakhaarkaasi u dhaweyd sida wararku sheegayaan.